သရဖီပင် - ဝီကီပီးဒီးယား
သရဖီပင်သည် ပုန်းညက်ပင်နှင့်မျိုးတူဖြစ်၍ ဂတ်တီဖာရီ(Guttiferae; ယခုအခါတွင် Calophyllaceae) မျိုးရင်း၌ပါဝင်သည်။ ရုက္ခဗေဒအမည် အားဖြင့်ကယ်လိုဖိုင်လမ်စပက်တေဗီ (Calophyllum spectabile; ယခုအခါတွင် Calophyllum tacamahaca) ဟုခေါ်သည်လည်းရှိသည်။ ကယ်လိုဖိုင်လမ်ပိုလီယန်သွမ်(Calophyllum polyanthum)ဟု ခေါ်သည်လည်းရှိသည်။ ကယ်လိုဖိုင်လမ်ကွန်စတယ်ရိုင်(Calophyllum kunstleri; ယခုအခါတွင် Calophyllum rigidum)ဟု ခေါ်သည်လည်းရှိသည်။
ပူအိုက်သောရာသီဥတုရှိသည့်ဒေသများတွင် မူလပေါက်ရောက်ခဲ့ သောအပင်ဖြစ်၍ မြန်မာနိုင်ငံ၌တနင်္သာရီတိုင်း အမြဲစိမ်းတောများ တွင် အများအပြားပေါက်ရောက် သည်။ဝေါဟာရလီနတ္ထဒီပနီအရ မှာ သရဖီဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းသည်သုရာဘိသဒ္ဒါမှဆင်းသက်လာခြင်း ဖြစ်သည်။ သုရာဘိသဒ္ဒါပါဌ်တွင် ဥသရကျေ၍သရဘီဟုခေါ်တွင်လာရာမှသရဖီဟုရေးသားခေါ်ဝေါ်လာကြသည်။ တောင်ပုန်းညက် ပင်ဟုလည်း ယူဆရန်ရှိကြောင်းဖော်ပြထားလေသည်။
သရဖီပင်သည် ပုန်းညက်ပင်နှင့်အနေအထားတူသည်။ပင်စည်ဖြောင့်မတ်၍ အမြင့်ပေ ရဝ မှ ၈ဝ အထိရှိ ပြီးလျှင်လုံးပတ်ခုနစ်ပေခန့်ရှိသည်။ အရွက်များသည် ပုန်းညက်အရွက်ကဲ့သို့ ချောမွတ်ပြောင်လက်သည်။ အလျားလေး လက်မမှခြောက်လက်မအထိရှိသည်။ ပုန်းညက်ရွက်ကဲ့သို့ပင် ထူ၍သားရေကဲ့သို့မာကျောပြီးလျှင်အနားညီ သည်။ ရှည်ရှည်ဝိုင်းဝိုင်းပုံသဏ္ဌာန်ရှိသည်။ ပုန်းညက်ရွက်နည်းတူ အလယ်အကြောမမှအကြောငယ်များ ထင်ရှားစွာ ယှဉ်ပြိုင်ထွက်ပေါ် နေသည်။ပုန်းညက်နှင့်ခြားနားသော အခြားအချက်တစ်ရပ်မှာ အပွင့်ပွင့်ပုံမတူခြင်းဖြစ်သည်။ ပုန်းညက်ကဲ့သို့အခိုင်လိုက်မပွင့်ဘဲ အကိုင်းအခက်များမှအပွင့်ကလေးများတစ်ပွင့်ချင်းထွက်ပွင့်သည်။ အပွင့်ညှာတံ တို၍အပွင့်ကြဲသည်။
အပွင့် ကလေးများသည် ကံ့ကော်ပွင့်အသေးစားကလေးများနှင့်ဆင်ဆင်တူ၍ ဝတ်ဆံအဝါရောင်ရှိသော အဖြူပွင့်ကလေးများဖြစ်သည်။ သင်းပျံ့သောရနံ့ရှိသည်။ ဇေယျရန္တမိတ်ဆို 'ဆောင်းဘုံဌာနေ'ချီရတုတွင်ဖွဲ့နွဲ့သကဲ့သို့ 'ဝတ်ဆံရွှေခဲ၊ပုလဲချပ်စီ'ထားသည့်နှယ်လှပယဉ်ကျေးသော သရဖီပန်းကလေးများကို အမျိုးသမီးတို့ပန်ဆင်ရန်နှစ် သက်ကြသည်။တပေါင်းလအခါ သမယ၌ သရဖီပန်းများဖူးပွင့်ကြ လေရာ ရှေးမြန်မာစာဆိုကြီးများသည် တပေါင်းလရာသီဘွဲ့များ၌ သရဖီပန်းအကြောင်းကို ထည့်သွင်းစပ်ဆိုကြသည်။
အမျိုးသမီးစာဆိုတော် မယ်ခွေ၏ဆဲ့နှစ်ရာသီ အဲချင်း ၁၂ပုဒ်အနက်တပေါင်းလဘွဲ့၌ - နွေဦးမှတိမ်ခ၊ တောတောင်တလီ၊ မှိုင်းဝေရီနှင့်၊ ကတ္တီပါပေါင်း၊ ရွက်သစ်ကယ်လောင်း၊ ရွက်ဟောင်းပျံလို့၊ ခက်ရံမှဝေဝေ၊ အင်ကြင်းသရဖီ၊ ပန်းစုံစီနှင့်၊ သိင်္ဂီရောင်သွေး၊ ကြိုင်ကြိုင်ငယ်မွှေးလို့၊ ငှက်ကျေးငယ်ခြွေသည်၊ တောင်လေပြေ မုန် တိုင်းနှင့်၊ရေလှိုင်းသံတိုး ....'ဟုစပ်ဆိုခဲ့၏။ စာဆိုတော်ကြီးဦးမင်း၏ တပေါင်းလဘွဲ့လေးချိုးတွင်မူ ယခေါင်စဉ်ရှည် သဲစေတီတည်မြဲမို့၊ ရှစ်မည်က မြူချည်လျှင်၊ သရဖီရွှေလိုဝင်းလို|၊အင်ကြင်းသန္တာညွန့်တို့၊ဖူးကွန့်ကိုက်လှယ် ....ဟူ၍ သရဖီပန်းကလေးများ၏ ထင်ပေါ်သော ဝတ်ဆံအဝါရောင်ကို ရွှေရောင်နှင့်ခိုင်းနှိုင်းစပ်ဆိုခဲ့လေသည်။
သရဖီပင်၏အသားသည်ညို၏။ အတော်အသင့်မာသည်။ အကြောအမျှင်များ သိပ်သည်းလျက် ပြုပြင်ရလွယ်သောသစ်ပင်မျိုး ဖြစ်သည်။ သရဖီသားကိုသာမန်နည်းဖြင့်အခြောက်ခံ၍ အသားသေ အောင်ပြုလျှင် ကောက်ကွေးတတ်သောကြောင့် ပေါင်းဖိုတွင်အ ခြောက်ခံမှသာလျှင် သစ်ကောင်းရနိုင်သည်။
သရဖီသားကိုလှေစပ်ခြင်း၊ အိမ်ဆောက်ခြင်း၊လှေရွက်တိုင်၊လှည်း ထမ်းပိုးစသည်တို့ပြုလုပ်ရန် အသုံးပြုနိုင်လေသည်။တနင်္သာရီတိုင်း တွင် ပန်းတကာခေါ် သရဖီတစ်မျိုးရှိသေးလေသည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ Hassler M. (2019). World Plants: Synonymic Checklists of the Vascular Plants of the World (version Nov 2018). In: Species 2000 & ITIS Catalogue of Life, 2019 Annual Checklist (Roskov Y., Ower G., Orrell T., Nicolson D., Bailly N., Kirk P.M., Bourgoin T., DeWalt R.E., Decock W., Nieukerken E. van, Zarucchi J., Penev L., eds.). Digital resource at http://www.catalogueoflife.org/annual-checklist/2019. Species 2000: Naturalis, Leiden, the Netherlands. ISSN 2405-884X.
↑ Calophyllum spectabile Willd. (Plants of the World Online). Retrieved 16 December 2019
↑ Calophyllum kunstleri King (Plants of the World Online). Retrieved 16 December 2019
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=သရဖီပင်&oldid=496399" မှ ရယူရန်
၁၅ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၉၊ ၂၀:၅၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၅ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၉၊ ၂၀:၅၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။